Kugara neInvestment yeMacedonia uye Golden Visa
Isu tinopa Ehupfumi Kuenda Kunze Kunze Services muMasedhonia ye:
● Kugara nekudyara kuMacedonia
● Ugari nekudyara kubva kuMasedhonia
● Visa yegoridhe muMakedhonia
● Pasipoti yechipiri kubva kuMasedhonia
● Kugara nekudyara kuMacedonia nekudyara muzvivakwa
Best MaAgents ekugara zvakare neInvestment muMacedonia uye Magweta e Kugara patsva neInvestment muMacedonia uye ma broker e real estate Residency zvirongwa muMacedonia vanoshanda pamwe chete kuitira kuchengetedza kwevatengi.
Kugara patsva nemaInvestment vamiririri veMakedhoniya vanopa masevhisi ekugara nekudyara kuMakedhoniya, Kugara patsva nezvirongwa zvekudyara kuMasedhonia, Kugara nehurongwa hwekudyara kuMakedhoniya, Residency yechipiri nekudyara kuMakedhoniya, mbiri Residency nekudyara kuMakedhoniya, ugari uye ugari nekudyara kuMasedhonia , Kugara zvachose nekudyara kuMakedhoniya, Kugara kwechinguva nekudyara kuMakedhoniya, Kugara nehurongwa hwekudyara kuMakedhoniya, Kugara nehurongwa hwekudyara kuMakedhoniya, Ugari nekudyara kuMakedhoniya, Ugari nezvirongwa zvekudyara kuMakedhoniya, Citizenship nehurongwa hwekudyara kuMakedhoniya, wechipiri Citizenship by investment in Macedonia, dual Citizenship by invested in Macedonia, residential and Citizen by invested in Macedonia, ugari uye ugari nekudyara muMasedhonia, hupfumi Citizenship zvirongwa muMasedhonia, Ugari nehurongwa hwekudyara kuMakedhoniya, Ugari nehurongwa hwekudyara kuMasedhonia , yechipiri pasipoti muMakedhonia, yechipiri pasipoti zvirongwa muMasedhonia, yechipiri pasipoti chirongwa muMasedhonia, mbiri kechipiri pasipoti muMakedhonia, pekugara uye pasipoti yechipiri kuMasedhonia, repasipoti repasipoti repiri muMasedhonia, repasipoti repiri nekudyara kuMakedhoniya, repasipoti yekuva mugari wechipiri kuMasedhonia, yechipiri pasipoti chirongwa muMasedhonia, chechipiri pasipoti zvirongwa muMasedhonia, vhiza yegoridhe kuMasedhonia, mavhiza egoridhe kuMasedhonia, zvirongwa zvendarama vhiza muMasedhonia, chirongwa chendarama vhiza kuMasedhonia, chechipiri vhiza yegoridhe kuMasedhonia, chechipiri vhiza yegoridhe vhiza kuMasedhonia kuMasedhonia, ugari hwemo uye vhiza yegoridhe kuMasedhonia, kugara uye vhiza yegoridhe kuMasedhonia, ugari hwevisa hwegoridhe kuMasedhonia, chirongwa chendarama vhiza kuMasedhonia, zvirongwa zvevisa zvegoridhe kuMasedhonia.
"1 mira mhinduro" kune yako yese Residency nekudyara muMacedonia nerumwe rutsigiro.
Minimum Investment muMacedonia yeResidency nekudyara EUR 100,000
Nhanganyaya Makedhonia uye Kugara neInvestment
Dzidza zvakawanda nezveMasedhonia
Makedhonia irudzi diki, rakati kurei kupfuura ndima yeVermont, iri muSoutheastern Europe, Balkan kuti ive chaiyo. Yakagara ichiratidzwa neakakosha mauto epasirese, Masedhonia ine huwandu hwevanhu vangangoita mamirioni e2.07 asi zvikepe nhoroondo yakapfuma uye yechinyakare, senge yeGirisi. Vagari veMasedhonia vanosanganisira vashoma kwazvo vevanhu vechiRomani, zvimwe zvinonzi Roma kana maGypsy. MaRom anogara achitarisana nesarura uye kumiririrwa uye anowanzo kuve asina kukodzera kuwana nzvimbo dzeruzhinji. Muna 1994, hurumende yeMacedonia yakayeuka mutauro wechiRoma nekunyoreswa kwawo, uye muna 1996, zvikoro zvina zvegiredhi zvakarangarira mutauro wechiRoma pachirongwa chavo chekudzidzisa. Chiratidziro chevaRoma muhurumende chakavandudzwa ne0.1 muzana kusvika pa0.6 muzana kubva muna 2000 kusvika 2010. Mushure mekuratidzwa muguta reSkopje, guta guru renyika, parizvino kune vadzidzi vanodarika mazana mashanu vechiRoma mumakoreji uye vechidiki vechidiki makumi mashanu-500 vane yepamusoro dzidzo.
Ingangoita zvikamu gumi neshanu kubva muzana zvevagari veMakedhonia, kazhinji vechiRoma, vanogara vasina dzimba dzepamutemo, zvinoreva kuti havasvike kumatunhu akakosha, semuenzaniso, mvura kana simba, kana chitupa chepamutemo Pasina chitupa, vanhu ava havagone kuwana dziviriro, kuvimbiswa munharaunda, kana kuiswa inoculation. Sangano repedyo, semuenzaniso, Roma SOS inoshanda pamwe nemasangano asiri-epundutso, semuenzaniso, Habitat yeHumanity, kubatsira vanhu kuti vawane kufambira mberi kudiki uye vanzwisise kutenderera kwemvumo.
Kubva Makedhonia payakatora kuzvitonga kwayo muna1991, pakave nekukurukurirana neGreek pamusoro pekushandiswa kwezita rekuti Makedhonia. MunaNdira 2019, paramende yeMasedhonia yakatsigira zita shanduko kuNorth Macedonia uye vari kutarisira vhoti reparamende yeGreek kuti riite zita iri. Iri zita shanduko rinotakura nyika padhuze nekutora chikamu muNorth Atlantic Chibvumirano Sangano (NATO). Semunhu anobva kuNATO, Makedhonia angadai akavimbisa kuchengetedzeka uyezve zviwanikwa kusimudzira hupenyu hwevagari.
Vashanu muzana vechidiki veMacedonia havasi kuenda kuchikoro chepuraimari uye makumi matatu kubva muzana havasi kuzoenda kuchikoro chebetsero. Kuenda kunzvimbo kazhinji kunokanganisa kutora chikamu kwevechidiki. Makumi matatu nematatu ezana evana muquintile ine rombo shoma havaendi kuchikoro chepuraimari, vachisiyaniswa nezvisingaite zviitiko zvakadaro muquintile yakanyanyisa. Makomba anowedzerwa echikoro chebetsero sezvo makumi matanhatu muzana evana vari muquintile ine rombo shoma havaendi kwavari, zvichienzaniswa ne32 muzana chete yevechidiki mune quintile yakanyanyisa. Ngazvive sezvazvingaite, iwo mwero wekupedzisa chikoro chepuraimari wakakwira, pa64 muzana, iine 7 muzana kufambira mberi mwero wekudzikisa chikoro chebetsero.
Muna 1996, Makedhonia yakapa Continuous Medical Dzidzo (CME) iyo inogadzira mabasa ekurapa mitemo uye inogadzirira mahofisi. Parizvino, wese mugari anosvika pakufungwa kwakakosha kuburikidza nehurumende. Zvisineyi, avo vanorarama zvisiri pamutemo vaisazove nehurumende-yakapihwa ID, nenzira iyi hapana ehurumende ekurapwa masevhisi. Sisitimu yekurapa yekurapa inotora mutero kubva kune vese vanhu vanoshanda uye vanogara kuMasedhonia, inopa mahara ekudzivirira, inoratidza, uye kuporesa manejimendi manejimendi. Izvi zvinosanganisira kugara muchipatara nekukurukurirana nezvakanakira uye nyanzvi. Masisitimu ehutano akazvimirira anogara achidhura zvakanyanya kune anogara kugara, zvisinei, inogona kupa zvirinani kana nekukurumidza kurapwa uye dzimwe nzira dzekurapa.
Mhedzisiro huru yekufa muMasedhonia ndezvekutenderera kweropa, izvo zvakaumba zvikamu makumi mashanu nezvinomwe kubva muzana zvekupasa kwese muna57, neoplasm ine ngozi, maronda / kukuvadza, hutachiona hwekupemha, uye zvirwere zvehurongwa hwekupedzisira. Remangwana reMasedhonia rakajairika-ramangwana makore mashanu kwete zvakaenzana nemarudzi ari muEU uye ramangwana rakasimba reMasedhonia angangoita makore masere kumashure kweiyo Greece. Iyi misiyano inotangira kubva padanho repamusoro rehutachiona hwemwoyo hunounzwa nekushandisa kwakanyanya kwefodya, uye kusadzora hypertension uye hypercholesterolemia.
Kushaya basa muMasedhonia kuri pakurekodha-kuderera kwazvo, kuchidonha kubva pa21.1 muzana munaJune 2018 kusvika ku20.8 muzana kusvika pakupera kwegore ra2018. Mukubatana, kushaya basa kuGreek kwaive pa20.20 muzana muna Kubvumbi 2018. Mwedzi wakajairwa kusvika pamwedzi mubairo we Mushandi weMasedhonia ari $ 667.55. Ipo Macedonia ichidonhedza shure kwenhamba yakakosha yenyika dzeUN, nyika yakavandudzika mundima iyi sezvo mwedzi wakaderedzwa kusvika kumwedzi mubairo wakanyorwa yaive $ 370.96.
Muna 2015, 21.5 muzana yevagari vemuMacedonia vaigara pasi pemutsara wekuisa iyo Makedhonia munzvimbo yechi80 mukumisikidzwa kwenyika 139. Mhuri dzine vangangoita vashanu vanhu, kana vangangoita 48.5 muzana yeMasedhonia, vanowanzo kufurirwa nekushaiwa. Zvisineyi, Makedhonia yakawana ivhu nehupfumi hwayo hwepamusika, uye sezvo huwandu hwekushaikwa kwemabasa hwadzikira, hwakadhonza huwandu hwekushaiwa kubva pamazana makumi matatu nematatu muzana mugore ra31 kusvika pamwero wazvino.
Kudya nemvura zvinofadza kuMakedhoniya zvinogamuchirwa, sezvo zvikamu zvina kubva muzana zvevagari vemo vachirwara nekushaya kudya kwakakwana uye zvikamu makumi masere nematatu zvemvura yekunwa zvinonzwisisika zvinofungidzirwa kuti zvakachengetedzwa zvakachengetedzeka. Chiremera cheveruzhinji chine huwandu hwenzvimbo neminda yekurima, inozvitarisira nekuzvivandudza kuburikidza neMutemo weMafuro unodzora kuendesa muganho, madziva ekunwa, kuvandudzwa kwenzvimbo dzekuchengetera, dzakasununguka kubva kune zvinomera uye ndiko kutanga chete.
Muna 2011, 1.8 muzana yevechidiki vaive pasi pemutoro wakakodzera pachimiro chavo, nepo 4.9 muzana yevana vaive pasi pehurefu hwakanakisa pazera ravo uye 12.4 muzana yevana vaive vakafuta. Global Nutrition Report inotaura kuti Makedhonia inosangana nemhando mbiri dzakakosha dzehutano hunorema uye kurwara. Vanenge makumi maviri nematatu muzana yemadzimai vanoona zvinorwadza zvekupenda, iko kushomeka kwemaplatelet matsvuku mumuviri. Kunyangwe paine nyaya yekuti nyaya idzi dziripo, Makedhonia yakawana nzvimbo yekudzikisa kushomeka kwechikafu kubva ku23 muzana yevagari kusvika pa8 muzana.
Zvekutanga zvinyorwa zveResidency neInvestment yeMacedonia
Chishoma kudyara kwe Kugara nekudyara muMacedonia
Kugara nekudyara kweMacedonia
Kuchengetedza nguva yeResidency nekudyara kweMacedonia
Mushure memakore 3
Ugari Hwenyika Hwakabvumidzwa kuvagari veMasedhonia
Investment Sarudzo dze Kugara nekudyara kweMasedhonia
Bhizinesi rekudyara kuburikidza nesangano repamutemo mune chero chikamu
Nei uchienda kune Residency nekudyara kweMasedhonia
Makedhonia inyika inokura nekukurumidza uye iri kusimukira, iri muSouth-kumabvazuva kweEurope. Iyo ine inoshamwaridzika kwazvo bhizinesi nharaunda uye yakaderera mabhizinesi emitero kukondinendi. Nyika iyi inokwikwidza kuve nhengo yeEU, uye pasipoti yeMasedhonia yakapa iwe nemhuri yako rusununguko rwekuwana vhiza kunzvimbo yeSchengen. Iyo Macedonia yekudyara yekugara chirongwa inozivikanwa kune yayo ipfupi yekugadzirisa nguva yemavhiki matatu.
Mhuri inopinda muMacedonia
Kana mvumo yako ikagoverwa, iwe, murume wako uye vana vaunotarisira vanogonawo kuwana pekugara zvichibva munzira yekubatanidza mhuri.
Kugara nehurongwa hwekudyara muMacedonia tsigira
Nekudyara mukambani yeMacedonia, iwe unowana mvumo yekugara mukati memavhiki matatu ekuendesa chikumbiro chako. Iyi mvumo ngairege iwe ubvunze kugara zvachose mushure mekuve nemakore matatu ekugara zviri pamutemo, uye kuva mugari weMasedhonia mushure memakore masere.
Mari inodiwa kuMacedonia
Unofanirwa kuisa mari inosvika madhora mazana mashanu emadhora kuita bhizinesi reMasedhonia mune chero chikamu. Pamusoro pezvo, iwe unofanirwa kushandira vangangoita gumi vagari veMacedonia. Mari yekugadzirisa inoenderana nenhamba uye zera remitezo yemhuri, iyo inosanganisirwa mukushandisa kwako.
Mutengi kutsigira Residency nekudyara kweMacedonia
Chikwata chedu che Residency neInvestment Agents kuMasedhonia uye Residency ne Investment Lawyers yokuMasedhonia inopa vatengi uye mhuri dzavo muMasedhonia nerutsigiro rwekuva mugari nekudyara kubva kuMasedhonia, kugara nekudyara kubva kuMasedhonia uye mimwe mikana yekudyara yekufambisa, munyika makumi matatu nenomwe.
Masevhisi edu haangogumirwi ekugara nekudyara kubva kuMakedhoniya kana Golden Visa kubva kuMasedhonia kana kuva mugari nekudyara kubva kuMasedhonia kana yechipiri pasipoti, isu tinobatsirawo mune yakanakisa dzimba dzekudyara mikana kubva kuMasedhonia, ichipa mhinduro izere kana uchida kutanga kambani mu Masedhonia kana kumahombekombe, zviwanikwa zvevanhu muMacedonia uye nezvimwe zvakawanda, izvo zvinosanganisira kuronga zvemari uye zvimwe zvakawanda.
Kubatsira vatengi vedu nehugari-hwakavakirwa mhinduro mukati uye kubva kuMakedhoniya uye kugara kwechipiri.
Rutsigiro Rwakakosha rwevagari veMacedonia:
Isu tinopa zvinodhura Kugara nemabasa ekudyara yekuMasedhonia, kuburikidza nezvatinokwanisa mari yekudyara uye yekufambisa mutemo yekuMakedhoniya, inokwanisika inivhesitimendi yekupinda kune dzimwe nyika magweta ekuMakedhoniya, inokwanisika Residency nevarairidzi vanopa mazano kuMakedhoniya, inokwanisika Kugara nemagweta ekudyara kuMakedhoniya uye inokwanisika yekufambisa yekufambisa femu kuMacedonia
Kugara nekudyara kubva kuMasedhonia kuenda ku37 Nyika.
Ndarama vhiza muMasedhonia kuenda ku37 Nyika.
Ugari nekudyara kubva kuMasedhonia kuenda ku37 Nyika.
Yechipiri pasipoti kubva kuMasedhonia kuenda ku37 Nyika.
Bhizinesi Kubva kune dzimwe nyika kubva kuMasedhonia kuenda ku106 Nyika.
Kugara nehurongwa hwekudyara kubva kuMasedhonia.
Goridhe visa zvirongwa muMasedhonia kuenda ku37 Nyika.
Ugari nemapurogiramu ekudyara kubva kuMasedhonia kuenda ku37 Nyika.
Chechipiri pasipoti zvirongwa kubva kuMasedhonia kuenda ku37 Nyika.
Mapurogiramu ebhizinesi ekupinda munyika kubva kuMakedhoniya kuenda ku106 Nyika.
Kugara neInvestment yeMasedhonia kuburikidza neReal Estate
Isu tinopa rutsigiro rwezvivakwa zvekudyara zvivakwa muMacedonia nemaonero ekuti mutengi anofanira kuwana kudzoka kwakanaka mukudyara kuMasedhonia, chero nguva, pavanoda kusarudza kubva mukudyara kwavakaita kwavo kweKugara kwavo nekudyara kweMasedhonia. Isu tinosungirirwa nevashoma vashoma vezvivakwa zvevatengesi kuMakedhoniya vane yakanaka track rekodhi uye yavo pfuma iri munzvimbo dzakanaka muMasedhonia, kutora zvakanaka kudzoka.
Akanakisa edzimba dzimba dzekugara zvirongwa zveMasedhonia neinvestment muzvivakwa muMacedonia.
Unoda kuziva - Makedhonia Kugara neInvestment
Kugara neInvestment Gweta kuMasedhonia kunopa zvakadzama zvinyorwa zvinyorwa kune yako yakabudirira Residency nekudyara kuMakedhoniya. Yedu yakajairwa masevhisi ekugara zvakare neInvestment kuMakedhoniya inosanganisira:
Magweta edu anonzwisisa zvaunoda kuti utamire kubva kuMasedhonia kana kuenda kuMasedhonia, zvichibva nekuti ndeapi mazano angaitwa
Isu tinotungamira Kwekutanga Kukoshesa Kushingairira, kugadzirira mushumo usati wakurudzira Residency nekudyara kuMakedhoniya kune vatengi kuti vawane Residence Mvumo yeMasedhonia uye kudzora njodzi yekuramba.
Kubva pane mushumo wekushingairira kuMakedhoniya, isu tinokurudzirawo mamwe mapurogiramu ekubudirira kuri nani.
Kuti isu tifambire mberi neako Residency nekudyara kunyorera kuMakedhoniya isu tingangoda makopi akaongororwa evatengi uye nhengo dzemhuri pasipoti
Dudziro uye apostile ezvinyorwa Kugara nekudyara kunyorera kuMasedhonia. Magweta edu akasarudzika e Residency nekudyara kuMakedhoniya uye goridhe vhiza inobatsira nekuzadza mafomu uye zvinyorwa.
Kana yako uye yako yemhuri zvinyorwa zve Residence nekudyara kunyorera kuMakedhoniya kwagadzirira, tichazvizadza nezviremera zvakakodzera zveMasedhonia.
Duration: 3 mavhiki
Kamwe chikumbiro chako chekugara patsva nekudyara kweMakedhonia chabvumidzwa, tinogovana nhau dzakanaka newe uye tobva tatanga kugadzirira zvimwe zvinotsigirwa.
Isu hatitsigire kana kupa Residency nemabasa ekudyara kuMakedhoniya kune avo vataurwa pazasi Vanhu kana mabhizinesi muMacedonia:
Residency nebasa rekudyara kuMakedhoniya hadzisi kupihwa kune Vatengesi kana vanogovera zvombo uye mabara kubva kana kuenda kuMasedhonia.
Residency nezvirongwa zvekudyara kuMakedhoniya hadzipi kupihwa kweTechnical kuongororwa muMacedonia kana maindasitiri espionage ezvirongwa zvekudyara mukati kana kubva kana kuenda kuMasedhonia.
Residency nekutsvaga kwekudyara kuMakedhoniya hazvipi kupihwa chero zvisiri pamutemo kana mhosva zviitiko muMasedhonia
Residency nerutsigiro rwekudyara yokuMasedhonia haisi yevanhu vanobata maGenetic zvinhu muMacedonia.
Residency nebasa rekudyara kuMakedhoniya haisi yemabhizimusi anotengesa zvombo zvine njodzi kana zvine ngozi zvebhagiriya kana zvombo zvenyukireya muMacedonia.
Residency nechirongwa chekudyara rutsigiro rweMasedhonia haruwanikwe kune vanhu veMasedhonia vanoita mukutengesa, kuchengetedza kuMasedhonia, kana kutakurwa kwenhengo dzeVanhu.
Residency nekudyara yokuMasedhonia haisi yematare asiri pamutemo ekurera vana.
Residency zvirongwa zvebasa yokuMasedhonia hadzisi dzezvitendero uye masangano avo eMacedonia.
Residency nebasa rekudyara mu Masedhoniya haina kupihwa kune vanhu vanobata mune Zvinonyadzisira muMacedonia.
Kugara Kwedu magweta muMasedhonia haitsigire bhizinesi rekutengesera mumidziyo yezvinodhaka muMacedonia.
“Chiziviso Chakakosha : MM Solutions INC inotora chengetedzo inonzwisisika kunyatso gadza AML zvinyorwa zvevatengi veMakedhonia neKYC yavo asi isu hatigamuchire chero mutoro (s) wekurambwa kupi zvako nezviremera zveMakedhoniya kubvumidzwa kwekunyorera Residency nekudyara muMacedonia.
Kugara nekudyara muMasedhonia nedzimwe nyika, pamwe nezvimwe zvakawanda zvinotsigirwa.
Isu tinopa yakanakisa Residency nerutsigiro rutsigiro muMacedonia yekudyara, kutamira kune dzimwe nyika uye kuronga kwezvivakwa muMasedhonia.
Inotsigirwa neInternational Residency neruzivo rwekudyara uye zvido zvemutemo zveMasedhonia, tinogadzira mhinduro dzakanakisa.
Yedu Residency nemabasa ekudyara kuMakedhoniya inopa mitengo yakachipa kwazvo, ine chinzvimbo chinobudirira cheMacedonia.
Isu takatora makore eruzivo rwekugara kwevaviri kuMakedhoniya vachitsigira vatengi pamwe nemhuri dzavo kuMasedhonia.
Ruzivo rwekugara zvakare nevanotsvaga mari kuMakedhoniya uye vamiririri vepamutemo veMasedhonia vanopa rutsigiro kune vatengi.
Tine akanakisa magweta nevamiriri veMakedhonia kubata maitiro uye kunyorera avo vakazvipira kubudirira kwako.
Pamberi pekugara kwako kuMasedhonia uye mushure mekubvumidzwa, nhengo yedu yechikwata chepamusoro yaizovapo yebhizinesi kana rutsigiro rwemunhu kuMacedonia
Isu tine ruzivo rwepasirese muResidency nekudyara kusanganisira Macedonia, kubatsira vatengi kubva kuzere pasirese nemasevhisi akanakisa.
Muchiitiko icho, Kugara kwako nekudyara kuMakedhoniya kunokundikana, kune dzimwe nyika makumi matatu nenomwe dzatinoshandira, isu takagadzirira nehurongwa B.
Verengai mutengo weKugara neInvestment kuMasedhonia
Kuti uverenge mutengo weKugara nekudyara kweMasedhonia ndapota zadza zvese zvese kusanganisira nhengo dzemhuri uye zera ravo. Nekuda kwenhamba huru yevatengi veMasedhonia, isu tinokwanisa kupa masevhisi ari nani nemutengo wakaderera. Kuverenga kuchaita, kunosanganisira, mutengo weKugara nehurongwa hwekudyara kuMasedhonia uye zvimwe zvikwereti.
mhando vhiza yokuMasedhonia
Maitiro Ekubvumidza Kubatira kuMasedhonia
Kwekugara kwenguva pfupi kuMasedhonia
Permanent Residence muMacedonia
Embassies uye maMiriri eMasedhonia
Kugara zvakare neInvestment muMasedhonia uye Mamwe maSevhisi
Isu takanyora pasi mashoma mashoma mamwe masevhisi atinopa kuMasedhonia kune izvozvi kana zvemberi zvinodiwa.
Kana iwe uri kuronga kutamira nemhuri yako kuenda kuMasedhonia nekudyara, isu semumwe wako kuMasedhonia, tiripo kuti tipe zvakawanda zveimwe sevhisi uye uye kana iwe ungangoda muMasedhonia nemitengo inodhura.
Kunze kwekugara patsva nekutsvaga kwekudyara kuMakedhoniya, isu tinopa bhizinesi, IT neHR masevhisi zvakare kuMasedhonia, ayo ausingakwanise kuwana pasi peimwe amburera yakapihwa nevamwe vapi vamazano kuMasedhonia ichitigadzira shopu imwechete yekuMasedhonia nenyika 106.
"Takasimudzira makore ekuyedza uye pasi rose mu106 Nyika kubatsira mhuri, vanhu, uye bhizinesi kuMacedonia mukuzadzisa zvinangwa nezvishuwo zvavo."
Isu tinotsigira yedu mutengi nzira yekupfuura Residency nekudyara kuMakedhoniya nerubatsiro rwemagweta edu, vanachipangamazano uye vakasunga -Masedhonia nepasi rese.
Tinogona kukubatsira kunyoresa kambani muMacedonia kana Offshore uye 106 Nyika (Mari yekunyoresa kambani muMacedonia inodhura nesu.)
Akaundi yeBhangi muMasedhonia
Chero ani investor anotamira kuMasedhonia angangoda akaundi yako kubhengi muMakedhonia uye account yebhangi yekambani muMasedhonia, isu tinogona zvakare kubatsira nemaoffshore bank account.
Sipo rekubhadhara muMasedhonia
Kana iwe uchida kubvunza muMakedhonia, ye dhijitari yekubhadhara mhinduro muMasedhonia senge yechinyakare kana fintech yekubhadhara gedhi muMasedhonia kana crypto mhinduro, tizivise.
Mushure meResidency nekudyara ku Makedhonia kana uchironga tanga bhizinesi nekutenga bhizinesi riripo muMasedhonia kutanga pakarepo muMasedhonia.
HR Services muMasedhonia
Our kambani yevashandi muMacedonia inogona kukubatsira nekukurumidza kutora vanhu. Iwe unogona zvakare kutumira nzvimbo muMacedonia vakasununguka.
Nhamba Dzenhare dzeMacedonia
Bhizinesi foni masystem eMacedonia pamwe ne nhamba chaiyo yeMasedhonia Nyika 102 uye Maguta 291.
Zvemari Kuronga Services muMasedhonia
Accounting, zvakakodzera kushandira muMakedhonia uye zvakawanda.
Virtual Hofisi Kero muMacedonia
Setup bhizinesi muMacedonia
Mushure mekugara patsva nekudyara kuMakedhoniya, setup bhizinesi mu Masedhoniya.
Isu tinopa pazasi zvataurwa IT mhinduro muMasedhonia
Kugadzira Webhu muMacedonia
Ecommerce Kuvandudza muMasedhonia
Webhu kuvandudza muMacedonia
Kuvandudza kweBlockchain muMasedhonia
App Kubudirira muMacedonia
Software Kubudirira muMacedonia
Magweta e Residency neInvestment muMasedhonia
Isu tinopa Residency zviri pamutemo neInvestment mhinduro kuMasedhonia uye kubudirira kwevatengi vedu kwakakosha, kuMasedhonia, isu tiri vatungamiriri, kambani yedu yemutemo kuMasedhonia ine vamiririri vekunze vanoenda kuMasedhonia, isu tine mukurumbira wekuburitsa yakanakisa mutengi sevhisi yekuMacedonia ne kujekesa zvine hungwaru mhinduro dzekudyara kweMacedonia vanhu uye mhuri. Yedu Residency neboka rekudyara kuMakedhoniya inopa mhinduro dzakagadzirirwa kubudirira kweVatengi.
Nhengo dzemhuri yako (vana, mukadzi, vabereki) vanokodzera kupihwa mvumo yekugara kuMasedhonia, pane mvumo yekugara muMacedonia ichibvumidzwa.
Simba regweta reMasedhonia rinodikanwa kune ese matanho epamutemo pachinzvimbo chako neResidency nevagadziri vekudyara kuMakedhoniya. Kana iwe uri kuMasedhonia kana kuronga kushanyira Makedhonia, tinogona kuwana simba rako regweta pano.
Isu hatibhadharise zvimwe kuti tiwane Simba regweta. Kana iwe uchironga kutanga kunyoreswa kwekambani kuMasedhonia uri kure, simba rako regweta rinofanirwa kuve rakanyoreswa zviri pamutemo kuti rishandiswe mudunhu reMasedhonia. Zvichienderana nenyika yaunogara, inofanirwa kuve yakatendeka kana kunyoreswa zviri pamutemo nemumiriri weMasedhonia.
Inowanzo Bvunzwa Mibvunzo - Kugara neInvestment muMasedhonia
Ndeipi tsananguro yekugara nekudyara muMacedonia?
Kugara patsva nekudyara kuMakedhoniya, kunogona kutsanangurwa sekuwana kugara kweMasedhonia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweMakedhonia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. inotsigirwa nekugara nemasevhisi ekudyara kuMakedhoniya, kuburikidza nekugara kwedu kwakanakisa nemagweta ekudyara kuMakedhoniya, kugara kwakanyanya nemagweta ekudyara kuMakedhoniya uye kugaramo kwakanakisa nevarairidzi vezvekudyara kuMakedhoniya, vanoshanda pakunogara zvakanaka nevamiririri vezvekudyara kuMasedhonia, uye mafemu akanakisa ekuona nezvekupinda munyika. muMasedhonia.
Kugara nemabasa ekudyara kuMakedhoniya | Kugara patsva nevamiriri vezvekudyara muMakedhonia Kugara nemagweta eInvestment muMacedonia | Kugara nemagweta ekudyara kuMakedhoniya Kugara nevekudyara varidzi kuMacedonia
Ndeipi tsanangudzo yekuva mugari nekudyara kuMakedhoniya?
Ugari nekudyara kuMasedhonia, hunogona kutsanangurwa sekuwana ugari hweMasedhonia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweMakedhonia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge bhizinesi, zvivakwa, zvisungo zvehurumende, nezvimwe kuMasedhonia. Nyorera kuva mugari wemo nekudyara kuMakedhoniya, kuva mugari nehurongwa hwekudyara kuMakedhoniya kunotsigirwa nehugari hwemo nekudyara masevhisi kuMasedhonia, kuburikidza nehukama hwedu hwakanakisisa nemagweta ekudyara kuMakedhoniya, kuva mugari wepamusoro nemagweta ekudyara kuMakedhoniya uye kuva mugari wepamusoro nevarairidzi vekudyara kuMasedhonia, kushanda kuva mugari wemo wakanakisa nevamiririri vezvekudyara kuMakedhoniya, uye akanakisa mafemu ekushambadzira ekupinda munyika muMacedonia.
Affordable Investor immigration services kuMasedhonia | Vanodhura vanoenda kune dzimwe nyika vanokumbira kuMacedonia | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika magweta muMacedonia | Vanodhura varidzi vekupinda munyika magweta muMacedonia | Vanodhura vatyairi vekune dzimwe nyika vanachipangamazano kuMasedhonia | Affordable immigration law firms kuMacedonia
Ndeipi tsanangudzo yepasipoti yechipiri muMakedhonia?
Yechipiri pasipoti muMasedhonia, inogona kutsanangurwa sekuti, kuva mugari wepamutemo weMasedhonia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweMasedhonia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvivakwa, bhizinesi, zvisungo zvehurumende, nezvimwe. wechipiri pasipoti masevhisi eMacedonia, kuburikidza nemagweta edu epiri epasipoti kuMakedhoniya, magweta echipiri epasipoti kuMakedhoniya uye akanakisa echipiri mapasipoti mazano kuMakedhoniya, achishanda pane akanakisa echipiri mapasipoti muMasedhonia, uye akanakisa mafemu ekubvunzurudza.
Chechipiri pasipoti masevhisi eMacedonia | Chechipiri pasipoti vamiririri muMasedhonia | Yechipiri mapasipoti magweta muMasedhonia | Yechipiri mapasipoti magweta muMacedonia | Chechipiri pasipoti vanopa mazano kuMasedhonia
Ndeipi tsananguro yegoridhe visa muMakedhonia?
Ndarama vhiza kuMasedhonia, inogona kutsanangurwa sekuti, kuwana mvumo yekugara yeMasedhonia kuburikidza nekudyara muhupfumi hweMasedhonia kuburikidza nenzira dzakasiyana senge, zvisungo zvehurumende, bhizinesi, zvivakwa, nezvimwewo. goridhe vhiza masevhisi eMacedonia, kuburikidza neyedu akanakisa egoridhe vhiza magweta kuMasedhonia, magoridhe mavhiza egweta muMasedhonia uye akanakisa egoridhe vhiza mazano kuMasedhonia, vachishanda pane akanakisa egoridhe vhiza vamiririri muMasedhonia, uye akanakisa ekupinda kwekufambisa makambani kuMasedhonia.
Ndarama vhiza services kuMasedhonia | Ndarama vhiza vamiririri muMasedhonia | Magoridhe vhiza magweta muMacedonia | Magoridhe vhiza magweta muMacedonia | Ndarama vhiza vanopa mazano kuMasedhonia
Ndechipi chiri chidiki chekudyara kweResidency nekudyara muMacedonia?
Pashoma kudyara kweResidency nekudyara muMasedhonia iEUR 100,000.
Iwe unopa rubatsiro rwepamutemo kuMasedhonia yeResidency nekudyara here?
Ehe, gweta redu muMacedonia nevamiriri kuMasedhonia vanopa rutsigiro rwekugara zvakare nekudyara kuMasedhonia.
Kugara nekudyara kuMacedonia kunodhura here?
Mutengo weKugara neInvestment kuMakedhoniya uye Kugara nekudyara mari zvinodiwa kuMasedhonia ndeye yakakwira mambure akakosha vanhu, isu tinobhadharisa chete kubvunza fizi yeResidency neInvestment kuMasedhonia, isu tinopawo yakawanda mimwe mitsigiro yeResidency neInvestment mhinduro.
Ndeapi vagari venyika vanogona kunyorera Residency nekudyara kuMasedhonia kana investor vhiza kuMasedhonia?
Kugara nemabasa ekudyara mari anogona kushandiswa nevagari venyika chero ipi asi mienzaniso mishoma ndeyeKugara nekudyara kuMacedonia kubva kuAsia, Kugara nekudyara kuMacedonia kubva kuAfrica, Kugara nekudyara kuMakedhoniya kubva kuEurope, Residency nekudyara kuMakedhoniya kubva kuSouth America, Kugara nekudyara kuMacedonia kubva kuMalaysia, Kugara nekudyara kuMacedonia kubva kuBangladesh, Kugara nekudyara kuMakedhoniya kubva kuIndonesia, Kugara nekudyara kuMacedonia kubva kuSri Lanka, Kugara nekudyara kuMacedonia kubva kuNepal, Residency nekudyara kuMakedhoniya kubva kuIndia neResidency. nekudyara kuMacedonia kubva kuUAE.
Professional Residency neInvestment Guidance yokuMasedhonia
Kumbira kubvunza Mahara kune yako Residency neInvestment kuMasedhonia
Mazwi akakosha muResidency neInvestment yeMacedonia
Bazi rezvekunze- www.mfa.gov.mk
State Commission yekudzivirira Hwori- unofirenze.bm
Commission yeKudzivirirwa Kwekodzero Yerusununguko Rwekuwana Ruzhinji Ruzivo- www.inoda.gov.mk
Vashandi veVashandi veHurumende- www.reek.gov.mk
Ministry of Transport and Communications- www.mtc.gov.mk
Sangano rekuvandudza uye Investment- www.adi.gov.mk
Pfungwa yose muhoro- www.nemusic.mk
Postal Agency- www.vap.mk
Ministry of Environment uye Kuronga Kwemweya- www.yoruka.krg
Directorate yeKudzivirira Mari Kubiridzira- www.varpp.gov.mk
Simba Rinodzora Commission- www.abv.org.mk
State Kuongorora Hofisi- www.zvr.gov.mk
Hurumende yeRepublic of Macedonia- vandit.bd
Ministry of Dzidzo neSainzi- www.mabve.nrt.k
Bazi Rezvehupfumi- www.unove.gov.mk
Capital Supervision Agency- www.mapas.gov.mk
Central Registry yeRM- ydc.com
Tsika Yekutonga- www.chinoda.gov.mk
Bazi rezveHutano- www.zrefva.gov.mk
Ministry of Dziviriro- www.morm.gov.mk
Yebasa agency-www.zvrgee.gov.mk, www.zvere.gov.mk
Mutungamiri weRepublic of Macedonia- www.naboss.gov.mk
Sangano reReal Estate Cadastre- www.katastar.gov.mk
Emigration Agency- www.anXNUMXamsey.com
Ministry of Culture- www.gorai.gov.mk
Commission yeKudzivirirwa kweMakwikwi- www.kzk.gov.mk
Ministry of Agriculture, Masango uye Mvura Management- www.yzz.gov.mk
Kunze Kwekunze Agency- www.warewmartonia.com
Secretariat yeEuropean Affairs- wdc.sg wdc.sg
Bazi rezveMari- www.phaso.gov.mk
Ministry of Labor uye Zvemagariro Policy- www.ykak.ovov.mk
Yepamutemo Gazeti reRepublic of Macedonia- www.zanies.com.uk
Mahofisi, vamiririri uye makomisheni Public Revenue Office- www.ujp.gov.mk
Vashumiri Ministry of Internal Affairs- www.mmbi.gov.mk
Paramende yeRepublic of Macedonia- www.muzsan.mk
Veruzhinji Kutenga Bureau- www.kunotechnik.finance.gov.mk
Ministry of Yemunharaunda Kuzvitonga- www.yorama.gov.mk
Dhairekitori reDzidziso Dziviriro- www.zlp.gov.mk
Sangano reMagetsi Kutaurirana- www.ekek.mk
Sangano rekusimudzira Kwekurima Kwekurima- minyama.gov.mk
Hurumende Services- www.wurgi.gov.mk
Sangano reRutsigiro rweMabhizimusi- www.chemagen.gov.mk
Ministry of Justice- www.pravda.gov.mk
Commodity Reserves Bureau- www.dr.gov.mk
Energy Agency- www.ea.gov.mk
Link to Dhipatimendi Rekupinda kweMacedonia , vane basa rekuumba marongero ekuchimbidza Immigration muMacedonia